Booqo Britain Hadda waxaadna ku biiri kartaa Maamulaha ETOA Tom Jenkins oo leh "Mid Qabow"
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Booqo Britain Hadda waxaadna ku biiri kartaa Maamulaha ETOA Tom Jenkins isagoo leh "Mid Qabow"
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • LGBTQ • Shirarka • News • Dadka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • video
Booqo Britain Hadda waxaadna ku biiri kartaa Maamulaha ETOA Tom Jenkins isagoo leh "Mid Qabow"
Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa maanta marti -gelisay Su’aalo iyo Jawaab iyadoo ay booqdeen Madaxweyne Ku -xigeenka Fulinta Britain Gavin Landry iyo Tom Jenkins, Maamulaha Guud ee ETOA. Xoghayihii hore ee UNWTO Dr. Taleb Rifai iyo aasaasihii iyo khabiirkii amniga Dr. Peter Tarlow ayaa ku biiray labada dhexdhexaadiye, halka Guddoomiyaha WTN Juergen Steinmetz ay si wadajir ah ula soo shaqeeyeen Blanca.
Iyada oo xannibaado ka jiraan guud ahaan Ingiriiska, nolosha caadiga ah ayaa laga yaabaa inay wali hakad ku jirto, laakiin taasi micnaheedu maahan inaadan sahamin karin baadiyaha quruxda badan ee Britain, waxaad ku wareegi kartaa xeebaha bacaadka ah ee Ingiriiska, oo aad mar kale ogaan kartaa astaamaha taariikheed ee Ingiriiska.
Joogsigan si loo sahamiyo England ayaa maanta isbedelay booqdayaashii ka yimid Mareykanka iyo inta badan waddamada Yurub.
Tom Jenkins, agaasimaha guud ee shirkadda Ururka Dalxiiska Yurub (ETOA), ayaa maanta ku soo biirtay Q&A oo ay weheliyaan Gavin Landry, Madaxweyne Ku -xigeenka Fulinta, Ameerika, ee Booqo Ingiriiska.
Gavin wuxuu ka soo biiray Xafiiskiisa New York, halka Tom uu joogay Newcastle, England, isagoo ku sii jeeday maqaayad dhaqameed Ingiriis ah.
Hadda wuxuu mar kale ku biiri karay saaxiibbadiis Ameerika.
Rakaabka Maraykanka ah, oo ay la socdaan dhiggooda Midowga Yurub, ee si buuxda loo tallaaley ama muujin kara baaritaanka PCR, ayaa hadda loo oggol yahay inay ku raaxaystaan ​​goobaha badan ee Britain ay mar kale u fidiso martideeda.
Dr. Peter Tarlow, oo ah aasaasaha WTN, ayaa yiri: “Hadda waa waqtigii la booqan lahaa Britain. Weli lama ciriiri doono, qof walbana waa diyaar oo wuu ku faraxsan yahay inuu kula kulmo - booqdaha - mar kale. ”
Dhageyso maanta Su’aalo iyo Jawaabo ku saabsan waxa suurta galka ah iyo waxa aan weli suurogal ahayn oo uu kafaalo qaaday Alaabta Elite iyo Macluumaadka Bermuda.
U -duullimaadka Boqortooyada Midowday (UK) wadammada adduunka oo dhan waa sahlan tahay London Heathrow oo ah gegida dayuuradaha ee ugu weyn Yurub si fiicanna ugu xidhan badhtamaha London. Garoomada kale ee caalamiga ah ee muhiimka ah ee UK waxaa ka mid ah London's Gatwick, Stansted, iyo Luton; ee waqooyiga England - Manchester iyo Newcastle; galbeedka England - Birmingham; gudaha Wales - Cardiff; Scotland - Glasgow iyo Edinburgh; iyo Waqooyiga Ireland - Belfast.
Websaytka Booqashada Britain wuxuu leeyahay: Baararkayaga dhaqameedka ah iyo guryaheena sharafta leh ayaa sugaya inay ku siiyaan soo dhaweyn diiran oo Ingiriis ah markaan dhammaanteen awoodno inaan mar kale safarno, isla markaasna, waxaad weli ku dhex milmi kartaa dhaxalkayaga, ku raaxaysataa dhaqankeenna, oo meel fog ka qod cuntadayada aan ku faraxno. Fiiri maqaalladeenna ugu dambeeyay ama u bood kanaalkayaga bulshada si aad u heshid talooyin dheeraad ah iyo wax aan micno lahayn - waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ku malayso dhadhanka dhabta ah ee Ingiriiska.
Guddoomiyaha WTN Juergen Steinmetz ayaa sheegay in aysan jirin waqti ka wanaagsan oo qof ahaan loo kulmo, sidaa darteed ka qeybgalayaasha maanta ayaa isku raacay in ay ku kulmaan WSuuqa Socdaalka ee orld ee London (Oktoobar 31-Nofeembar 1) oo ay ku xigto IMEX America MICE show ganacsi Las Vegas (Noofembar 9-11).
Wax badan oo ku saabsan Shabakadda Dalxiiska Adduunka iyo sida loogu biiro shabakaddan caalamiga ah ee 128 dal ayaa laga heli karaa www.wtn.travel